Science InfoTech | विज्ञान जिज्ञासा Archives - Science InfoTech	विज्ञान जिज्ञासा Archives - Science InfoTech
अचम्मको संसार विज्ञान जिज्ञासा
के Blood Group तपाईको पोल खोल्न सक्छ ? रगत जीवजन्तुहरुको शरीरमा पाइने रातो तरल पदार्थ हो जसले शरीरको कोषहरुमा आवश्यक पदार्थहरु जस्तै पोषक तत्व र अक्सिजन पुराउछ। यो प्लाजमा र
अन्तराष्ट्रिय समाचार विज्ञान जिज्ञासा
एजेन्सी । विश्वमा कुखुरी पहिला कि अण्डा ? भन्ने प्रश्नको जवाफ आजसम्म कसैले दिन सकेका थिएनन । यो प्रश्न मानिसहरु बिच जहिले पनि विवादमा रहेको थियो । तर अहिले बैज्ञानिकहरुले यो
हरेक मानिसले सधैँ युवा रहिरहन चाहे पनि उमेर बढ्दै जाँदा त्यसको असर शरीरमा देखिन थाल्छ। उमेर बढेपछि छाला चाउरिन थाल्छ। आन्तरिक र बाह्रय दुई कारणले छालामा चाउरी पर्छ। वंशानुगत, छालाको
कलेजोका कोषहरुमा ट्राइग्लीसाइड तथा अन्य वोसोजन्य पदार्थ थुप्रिनुलाई फ्याटीलिभर भनिन्छ । कलेजोमा बोसोपनाको निर्धारण वोसो आउने र हट्ने प्रक्रियाको समीकरणले गर्छ । केही बिरामीमा फ्याटीलिभर सँगसँगै कलेजोको सुजन तथा कलेजोका
हिन्दु महिलाले पाउजु पहिरिन्छन् । महिलाको लगाउने यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । तर, यससँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ । चाँदीको पाउजु पहिरिनाले ढाड,
हिन्दु महिलाले कानमा बाली र झुम्का पहिरिन्छन् । महिलाको लगाउने यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । यतिसम्मकी आफ्ना बुज्रकहरुको भनाइलाई धारणा बनाउँदैं महिलाहरु पनि फेसनका रुपमा यी गहनाहरु पहिरिने
विवाहिता हिन्दु महिला खुट्टाको दोस्रो औलामा औठी पहिरिन्छन् । महिलाको लगाउने यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । तर, यससँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ ।
हिन्दु समाजमा विवाहमा बेहुलाले बेहुलीको सिन्दोमा सिन्दुर हाल्ने चलन पहिलादेखी चली आएको छ । महिलाको लगाउने यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । तर, यससँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई
हिन्दू परम्परा र मान्यता अनुसार हरेक विवाहिता महिलाले आफ्नो सिउँदोमा सिन्दुर लगाउने गर्दछन । महिला विवाहित कि अविवाहित भन्ने छुट्याउने पहिचान पनि हो सिन्दुर । यसलाई महिलाले सौभाग्यको प्रतीकको रुपमा
‘छ्या तिम्रो मुख कस्तो गन्हाएको अलि पर बस।’ यस्तो प्रतिक्रिया कुनै साथीबाट सुनियो भने जोकोहीलाई नराम्रो लाग्नसक्छ। मुख गन्हाउने समस्याले साथीभाइबीच मात्र नभई श्रीमान्-श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा समेत आँच आउनसक्छ। मुख गन्हाउने समस्या